ကိုကိုလင်းမောင် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ ဖန်တွေ ပွဲကြမ်းကုန်ပြီ....
ကိုကိုလင်းမောင် မှ “ဖြိုးမြတ်အောင် အင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတဲ့ သီချင်းရှိလား” လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်လို့ ပရိတ်သတ်များ ပွဲကြမ်း
“ဖြိုးမြတ်အောင် အင်္ဂလိပ်လိုဆိုထားတဲ့ သီချင်းရှိလား” လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ကိုကိုလင်းမောင် ဒီမေးခွန်းကြောင့် ပွဲကြမ်းနေပြီ။
ကိုကိုလင်းမောင်ဆိုတာ တချိန်က နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် ၁ ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလောကကနေ အနားယူထားတာ ကြာပြီဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာတော့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ် ရှိနေပါတယ်။
ဒီနေ့ လွင့်ပြန့်လာတဲ့ သတင်းမှာတော့ ကိုကိုလင်းမောင်ဟာ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ပြိုင်ဖက် ဖြိုးမြတ်အောင် အင်္ဂလိပ် သီချင်းဆိုထားတာရှိရင် ပြစမ်းပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
သူဟာ ဘယ်သူ့ဖန်မှမဟုတ်ပေမယ့်လည်း ဆေးထိုးတဲ့သဘောနဲ့ လုပ်တယ်လို့လည်း အရင်ပြောထားပါသေးတယ်။
သူ့ရဲ့ဖေ့ဘုတ်မှာတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါအကြောင်းအချို့ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ “ဆေးထိုးလတ်အူးမယ်နော် # ပြိုင်ဖက်က အာ့လို(ဘိုလို) ဆိုထားတဲ့သီချင်းလေးများရှိယင် … ? လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိူင်ပါသည်… (*မှတ်ချက်* ကျနော်မည်သူ့ FAN မှမဟုတ်ပါ)” ဆိုပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖြိုးမြတ်အောင်ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေဟာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေကြကာ ဒီ မြန်မာ Idol ပြိုင်ပွဲဟာ မြန်မာပြည်မှာပြိုင်တာ မြန်မာလိုဆိုတာ ဘာဖြစ်လဲဆိုပြီး တုန့်ပြန်ထားကြတာ ပါတယ်။
အချို့ကလည်း “မြန်​မာ လူမျိုးအင်္ဂလိပ်​သီချင်းမဆ်ိုတတ်​တာရှက်​စရာမဟုတ်​ မြန်​မာဖြစ်​ပြီးမြန်​မာသီချင်းမပီသ ​မေ့​နေမှား​နေတာမှရှက်​စရာ ဟုဆိုကာ ပြန်ပြောထားကြပါတယ်။ ဒီကိုကိုလင်းမောင်ရဲ့ စကား တခွန်းဟာ မြန်မာ Idol ကို ပွဲဆူသည်ထက် ဆူသွားပါစေတယ်။
ဆယ်လီ ၁ ယောက်အနေနဲ့ စကားကို အခြားသူ မထိခိုက်အောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြောသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါတယ်။ ပွဲကြမ်းမှုများ အောက်မှာ ရှု့စားကြပါ။
ကိုကိုလငျးမောငျ မှ “ဖွိုးမွတျအောငျ အင်ျဂလိပျလိုဆိုထားတဲ့ သီခငျြးရှိလား” လို့ မေးခှနျးထုတျလိုကျလို့ ပရိတျသတျမြား ပှဲကွမျး
“ဖွိုးမွတျအောငျ အင်ျဂလိပျလိုဆိုထားတဲ့ သီခငျြးရှိလား” လို့ မေးခှနျးထုတျလိုကျတဲ့ ကိုကိုလငျးမောငျ ဒီမေးခှနျးကွောငျ့ ပှဲကွမျးနပွေီ။
ကိုကိုလငျးမောငျဆိုတာ တခြိနျက နာမညျကွီး သရုပျဆောငျ ၁ ယောကျဖွဈပါတယျ။ အနုပညာလောကကနေ အနားယူထားတာ ကွာပွီဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာတော့ ပရိတျသတျတှနေဲ့ အဆကျမပွတျ ရှိနပေါတယျ။
ဒီနေ့ လှငျ့ပွနျ့လာတဲ့ သတငျးမှာတော့ ကိုကိုလငျးမောငျဟာ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုရဲ့ပွိုငျဖကျ ဖွိုးမွတျအောငျ အင်ျဂလိပျ သီခငျြးဆိုထားတာရှိရငျ ပွစမျးပါလို့ ပွောလိုကျပါတယျ။
သူဟာ ဘယျသူ့ဖနျမှမဟုတျပမေယျ့လညျး ဆေးထိုးတဲ့သဘောနဲ့ လုပျတယျလို့လညျး အရငျပွောထားပါသေးတယျ။
သူ့ရဲ့ဖဘေု့တျမှာတော့ မွနျမာအိုငျဒေါအကွောငျးအခြို့ ရေးသားထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ “ဆေးထိုးလတျအူးမယျနျော # ပွိုငျဖကျက အာ့လို(ဘိုလို) ဆိုထားတဲ့သီခငျြးလေးမြားရှိယငျ … ? လှတျလပျစှာပွောဆိုနိူငျပါသညျ… (*မှတျခကျြ* ကနြျောမညျသူ့ FAN မှမဟုတျပါ)” ဆိုပွီး ရေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသတျပွီး ဖွိုးမွတျအောငျရဲ့ ပရိတျသတျတှဟော မခံမရပျနိုငျဖွဈနကွေကာ ဒီ မွနျမာ Idol ပွိုငျပှဲဟာ မွနျမာပွညျမှာပွိုငျတာ မွနျမာလိုဆိုတာ ဘာဖွဈလဲဆိုပွီး တုနျ့ပွနျထားကွတာ ပါတယျ။
အခြို့ကလညျး “မွနျ​မာ လူမြိုးအင်ျဂလိပျ​သီခငျြးမဆျိုတတျ​တာရှကျ​စရာမဟုတျ​ မွနျ​မာဖွဈ​ပွီးမွနျ​မာသီခငျြးမပီသ ​မေ့​နမှေား​နတောမှရှကျ​စရာ ဟုဆိုကာ ပွနျပွောထားကွပါတယျ။ ဒီကိုကိုလငျးမောငျရဲ့ စကား တခှနျးဟာ မွနျမာ Idol ကို ပှဲဆူသညျထကျ ဆူသှားပါစတေယျ။
ဆယျလီ ၁ ယောကျအနနေဲ့ စကားကို အခွားသူ မထိခိုကျအောငျ ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး ပွောသငျ့ကွောငျး သုံးသပျမိပါတယျ။ ပှဲကွမျးမှုမြား အောကျမှာ ရှု့စားကွပါ။